वडा अध्यक्ष की बडा हाकिम ? - प्रशासन प्रशासन
प्रकाशित मिति : 19 August, 2019 8:01 am
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको पनि आफ्नै समस्याहरू रहेका छन् । अचानोको व्यथा खुकुरीलाई के थाहा ? कतिपय पालिकामा पुराना स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूले जनप्रतिनिधिलाई नटेरेको अवस्था पनि छ । जनप्रतिनिधि त आउँछन् जान्छन् हामी हो सधैँभरि बस्ने भनेर असफल बनाउन तिर लागेका छन् केही बुभ्रmुकहरु । वास्तवमा कर्मचारीतन्त्र स्थायी संयन्त्र हो, सरकार हो ।
पालिकामा जनताको प्रतिनिधिको प्रमुखको रूपमा अध्यक्ष वा प्रमुख हुन्छन् भने राज्यको प्रतिनिधिको रूपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहन्छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रस्टसँग तोकेको हुनाले अधिकार क्षेत्रको विषयमा कुनै विवाद छैन ।
अन्तमा, वडा अध्यक्ष कार्यकारी स्तरको पूर्णकालीन पद हो । उहाँहरू वडा सरकार प्रमुख हुन् । वडा समिति वडा सरकारको रूपमा रहेको हुन्छ । वडा कार्यालयले सेवा प्रवाहसँगै कार्यकारिणी, व्यवस्थापकीय र न्यायिक कार्यहरू समेत गर्दछ । त्यहाँ जनताको प्रतिनिधिको रूपमा वडा अध्यक्ष हुन्छन् भने राज्यको प्रतिनिधिको रूपमा वडा सचिव हुन्छन् । वडा अध्यक्षले वडा कार्यालयबाट नै विकास र सुशासनको झझल्को दिन सक्नुपर्दछ किनकि उहाँहरू वडा अध्यक्ष हुन् बडा हाकिम होइनन् ।
Tags : वडा अध्यक्ष हाकिम